ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ရင်ကို လာမှန်သော ဗလောင်းဗလဲ ခြောက်ခု
ရင်ကို လာမှန်သော ဗလောင်းဗလဲ ခြောက်ခု
ပိတ်ရက်မှာ တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့ စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့ ဗလောင်းဗလဲ ဖြစ်ရပ် ခြောက်ခုကို နံပါတ်စဉ်အလိုက် ရေးပြချင်ပါတယ်။ တချို့သော ဗလောင်းဗလဲဖြစ်ရပ်များဟာ လူအများရဲ့ ဘဝကို ထိခိုက်စေပြီး တချို့ဗလောင်းဗလဲကတော့ ကျနော့်တယောက်တည်းရဲ့ စိတ်ကို ထိခိုက်စေရုံမျှသာ တတ်နိုင်ပါတယ်။
(၁) နအဖရဲ့ အာဏာလွှဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိ
ကျနော့်ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်လို့ ရမှာမဟုတ်တဲ့ ကြုံဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံးသော ဗလောင်းဗလဲကြီး တခုပါ။ (၈ ရက် ၈ လ ၁၉၈၈) ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးကို လက်နက်အင်အားသုံး သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကို ခေါ်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့ အနိုင်ရတဲ့ ပါတီကို အာဏာလွှဲပေးပြီး စစ်တန်းလျားကို ချက်ချင်းပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ တတိုင်းပြည်လုံးထောက်ခံမှုနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရတဲ့အခါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာ သူရဲဘောကြောင်စွာ ကိုယ့်တံတွေးကိုယ်ပြန်မျိုပြီး အာဏာလွှဲပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဗလောင်းဗလဲကြောင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဘဝတွေကို ဆိုးဝါးတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
(၂) ကိုပေါ ကန့်ကွက်မဲပေးခြင်း
နံပါတ်နှစ်ကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဗလောင်းဗလဲပါ။
အဲဒီဗလောင်းဗလဲအတွက် အခုထက်ထိ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတိုင်း မခံချိမခံသာဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြုရေးအတွက် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်တဲ့အခါ ကျနော့်ရဲ့ မူလဆန္ဒက အဲဒီဆန္ဒခံယူပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ဆန္ဒပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း မဲသွားမပေးဘူး။ သူများတွေကိုလည်း မဲမပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းမယ်ပေါ့။ သပိတ်မှောက်ဖို့ ဆန္ဒဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ မဲသွားပေးခြင်းအားဖြင့် နအဖအစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံကို တရားဝင်အောင် လုပ်ပေးရာ ကျသွားမှာကို စိုးရိမ်မိတာကတကြောင်း၊ သူတို့ ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို လုံးဝမထောက်ခံနိုင်တာကတကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုနဲ့ တရားမျှတမှု လုံးဝရှိမှာ မဟုတ်တာကို သိနေတာကတကြောင်း စတဲ့ အကြောင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆန္ဒခံယူပွဲ နီးလာတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သွားရောက် ကန့်ကွက်မဲ ထည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလာတဲ့အခါ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒကို ဝန်းရံရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မူလဆန္ဒနဲ့ကြားမှာ မပြတ်မသား လွန်ဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကန့်ကွက်မဲသွားထည့်မိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နောင်တရမိပြီး စိတ်ထဲမှာ အင်မတန်လည်း မခံချိမခံသာဖြစ်ရပါတယ်။ မိမိရဲ့ မပြတ်သားမှုအတွက် အဖွဲ့ချုပ်ကို လက်ညှိုးထိုးတာမဟုတ်ပါ။ လူတွင်ပါလို့ နွားကျားကိုက်ဆိုသလို မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ်ချက် မပြတ်သားခဲ့ဘဲ ဗလောင်းဗလဲလုပ်ခဲ့မိတာကို ဆိုလိုခြင်းမျှသာပါ။ နောင်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်းပဲ ကိုယ်လုပ်ဖို့ အားခဲထားပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ဗလောင်းဗလဲလုပ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးဆက်အတွက် တခြားသူတွေကို ထိခိုက်ကောင်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေမှာတော့ ကျနော့်စိတ်ကို ပြန်လည်ထိခိုက်စေခြင်းက ပိုပါတယ်။
(၃) ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဦးစိန်လှဦးနဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း
ဧရာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းက အင်တာဗျူးမှာ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ပြောတယ်။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းဆိုတာ တကယ်တော့ သူရယ်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဦးစိန်လှဦးရယ် အဓိက ရေးဆွဲခဲ့တာပါတဲ့။ အဲဒီအဆို ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တာဝန်ရှိသူတွေကပဲ အတည်ပြုနိုင်မှာပါ။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို နအဖအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့မညီတဲ့ အချက်တွေကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ပြင်ဆင်ပေးဖို့၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပက လွတ်လပ်တဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ခွင့်ပြုဖို့ စတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်လျောပါမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ စဉ်းစားမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခုအဲဒီအချက်တွေအားလုံးကို နအဖက ဘာတခုမျှ မလိုက်လျောတဲ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေထုတ်ပြီး ထပ်မံဖိနှိပ်လာတဲ့အတွက် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မပြိုင်ဖို့၊ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းကို သူတို့ရေးခဲ့တာပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနဲ့ ဦးစိန်လှဦးတို့က “ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး” ဗလောင်းဗလဲလုပ်ပြီး မျက်နှာပြောင်စွာနဲ့ ပါတီအသစ်ထောင်ကာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါပြီ။ စကားမစပ်ကြုံလို့ပြောရရင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျနော်မဲပေးခဲ့တဲ့ အင်းစိန်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)က ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်က ဦးစိန်လှဦးပါခင်ဗျား။ အဲဒီတုန်းက အဖွဲ့ချုပ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သူ့ကိုမဲပေးခဲ့ရတာ ကျနော့်ထောက်ခံမဲ “သန” တယ်လို့ အခုတော့ ခံစားနေရပါတယ်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းကလည်း ဧရာဝတီအင်တာဗျူးထဲမှာ ဘယ်လောက်ထိ ဗလောင်းဗလဲ ပြောသလဲဆိုတော့… ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းက ဒီအချက် ဒီအချက်တွေကို လိုက်လျောရင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ စဉ်းစားမယ်လို့ပဲပြောခဲ့တာ…တဲ့။ ဒီအချက်တွေကို မလိုက်လျောရင် ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဘူးလို့ မပြောထားဘူး….တဲ့။ မှားပါတယ် ဒေါက်တာရယ်...ကျွန်တော်မျိုးကြီး သေသင့်ပါတယ်လို့သာ ပြောရမလားမသိ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့၊ မရိုးသားတဲ့၊ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုးပြောတတ်တဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာရှိရင် ဒီလိုလူမျိုးပါလားလို့တောင် မှတ်သားနိုင်ဖွယ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ဗလောင်းဗလဲလုပ်ရပ်ကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဆိုးကျိုးတွေ အမြောက်အမြား ဖြစ်ပေါ်စေဦးမှာတော့ အသေအချာပါ။
(၄) စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ပီအာရ် ပေါ်လစီ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကျော်ကျော် အချိန်ကအထိ စင်္ကာပူမှာ ပီအာရ် (အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်) ကျဖို့ဆိုတာ အတော်အတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ပီအာရ်ကျဖို့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမျိုးမရှိပေမယ့် စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်တဲ့ လုပ်သက်ကလည်း အတန်အသင့်ရှိရမယ်။ ဝင်ငွေအဆင့်အတန်းကလည်း မဆိုးရဘူး။ စင်္ကာပူက ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာ လက်မှတ်တခုခုကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ ရှေးတုန်းက အဲသလို ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်အတွင်းမှာ စင်္ကာပူအစိုးရက ပီအာရ်တွေကို ဖောချင်းသောချင်း ချပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေအကြားမှာ ဟာသ တခုတောင်ပေါ်လာတယ်။ “အိုင်စီအေ(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ လဝက)အဆောက်အဦးရှေ့က လမ်းတောင် ဖြတ်မလျှောက်ရဲဘူး။ လက်ကို ဖမ်းဆွဲပြီး ပီအာရ်ချပေးလိုက်မှာ စိုးလို့” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ စင်္ကာပူမှာ လူဦးရေ အဆမတန် တိုးတက်လာပြီး ဘတ်စ်ကား၊ မီးရထား၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အိုးအိမ် စတာတွေအားလုံးမှာ လူတွေ ကြပ်ညပ်ကုန်ပါတော့တယ်။ ဒီကြားထဲ စီးပွားပျက်ကပ်ကလည်း ဆိုက်လိုက်သေးတော့ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းထားမြင့်တက်လာတဲ့အခါ ဒေသခံ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေအတွက် သူတို့အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားငှားရမ်းမှု မူဝါဒကို ဝေဖန်စရာ၊ ကန့်ကွက်စရာ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ အဲသည်မှာတင်ပဲ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ လဝက ပေါ်လစီဟာ ချက်ချင်း ဂ ငယ်ကွေ့ကွေ့ပြီး ပီအာရ်ချထားမှုကို တင်းကြပ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီအထိကတော့ သူ့နိုင်ငံ၊ သူ့လိုအပ်မှုအရ ပေါ်လစီပြောင်းရတာဆိုတော့ ကိုယ်က နိုင်ငံခြားသားလည်း ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဝေဖန်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထဲမှာ၊ အသိတွေထဲမှာ ပီအာရ်မိဘနှစ်ပါးကနေ (စင်္ကာပူမှာ)မွေးလာတဲ့ ကလေးကို ပီအာရ်ချမပေးတဲ့အတွက် မကြာခဏဆိုသလို အိုင်စီအေကို သွားပြီး ကလေးအတွက် Social Visit pass သက်တမ်းတိုးနေရတဲ့ လူတွေရဲ့ ဒုက္ခကို မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ လဝက ပေါ်လစီ ဗလောင်းဗလဲကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ပေါ်လာပါတယ်။ ပီအာရ်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တင်းကြပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်….လုပ်ချင်သလို လုပ်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် ပီအာရ်မိဘနှစ်ပါးက (စင်္ကာပူမှာ)မွေးလာတဲ့ ကလေးကို ပီအာရ်ချမပေးတာကတော့ လူတွေကို အလုပ်မရှုပ်ရှုပ်အောင် သက်သက် ညစ်ရာကျနေပါတယ်လို့သာ ပြောချင်ပါတော့တယ်။
(၅) သီးလေးသီးနဲ့ ဗလောင်းဗလဲ
နံပါတ် ၅ အနေနဲ့ နာမည်ကျော် သီးလေးသီးရဲ့ ဗလောင်းဗလဲကို ပြောချင်ပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း သီးလေးသီး မြန်မာပြည်ကထွက်လာတော့ စင်္ကာပူမှာ အရင်ဆုံးလာ ကပြ တာမို့လား။ သူတို့ရဲ့ ပတ်စ်ပို့၊ လေယာဉ်လက်မှတ် စတာတွေအားလုံးအတွက် စင်္ကာပူက စီစဉ်သူတွေ အိပ်ကပ်ထဲက အရင်းစိုက်ထုတ်ပြီး ခေါ်ကြတာပါ။ ဒီရောက်တော့ ခေါ်တဲ့လူတွေမှာ တာဝန်ရှိတဲ့အလျောက် သူတို့ သဘောထားကို အတိအလင်း ဆွေးနွေးရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ပြန်ဝင်ဖို့ ဆန္ဒရှိမရှိ၊ ဒုက္ခသည်ခံဖို့၊ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိမရှိ ပေါ့။ ဒီမေးခွန်းတွေကို မေးရတာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်ဝင်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ပြက်လုံးပြက်တဲ့နေရာမှာ သတိထားပြက်ဖို့အတွက်ရယ်၊ မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့နေရာမှာ စကားအပြောအဆို သတိထားဖို့ရယ်အတွက်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ့ သူတို့ ပြန်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ပြည်ပက စီစဉ်သူတွေကတော့ ပြည်ပမှာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကျန်ရစ်မယ်။ သူတို့ကတော့ ပရိသတ်အကြိုက် လိုက်ပြက်ပြီး ထောင်ထဲဝင်သွားရတယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ပြန်မယ့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့အလျောက် စီစဉ်သူတွေကလည်း အဲဒီအချက်ကို ထည့်စဉ်းစားပြီး ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာပါ ဂရုတစိုက် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ပြည်ပပွဲစဉ်ခရီးတွေအတွင်း သီးလေးသီးဟာ မီဒီယာအင်တာဗျူးတွေအတော်များများမှာ “သူတို့ဟာ အများထင်သလို ပြည်ပမှာ ခိုလှုံခွင့် တောင်းပြီး နေမယ့်လူတွေမဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေကို ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ကြောင်း” တလျှောက်လုံး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားကို ကြားကာစကတော့ သီးလေးသီးရဲ့ သတ္တိကို လေးစားမိပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပက မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ သီးလေးသီးရဲ့ သတ္တိကို အတုယူသင့်တယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ နှစ်ဦးပိုင်းကတည်းက ထွက်လာလိုက်တဲ့ သီးလေးသီးဟာ အခုအချိန်အထိ ပြည်ပမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုကို ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့စကားဟာလည်း လေလှိုင်းထဲကလာပြီး လေလှိုင်းထဲမှာပဲ ပျောက်ပျက်သွားပုံရပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ဘာမှ မပြောခဲ့ဘဲ ပြည်ပမှာ ဆက်လက်နေထိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ကို ဘယ်သူကမှ ဘာမှ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်ပြန်ဖို့ ဆန္ဒလည်း မရှိဘဲ ဘာကြောင့် အဲသည်လို ပါးစပ်ကနေ ဗလွတ်ရွှတ်တွ ပြောထွက်ခဲ့သလဲဆိုတာ သီးလေးသီးကိုယ်တိုင်မှအပ အခြားသူကတော့ သေသေချာချာ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၆) မေငြိမ်းရဲ့ ဗလောင်းဗလဲ
မေငြိမ်းဆိုတာက စာရေးဆရာမ၊ တက္ကသိုလ်ဆရာမဟောင်း၊ ဘလော့ဂါ ဒေါ်မေငြိမ်းပါ။ ဆရာမမေငြိမ်း ဘလော့ဂ်ရေးခဲ့တဲ့ တလျှောက်လုံးမှာရော၊ ပြည်ပက အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးတဲ့ စာတွေကို ဖတ်မိသမျှလိုလိုကို အခုအချိန်အထိ ကျနော်နှစ်ခြိုက်ခဲ့တာတွေချည်းပါ။ (သူကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုယ့်သူနိုင်ငံရေးသမားလို့ မခံယူပေမယ့်) သူ့ဘလော့ဂ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ခံစားချက်၊ သူ့အယူအဆ၊ သူ့အမြင်တွေကို ရေးတဲ့အခါတိုင်း ကျနော်နဲ့ ထပ်တူကျလွန်းလို့၊ နှစ်သက်လွန်းလို့ ကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာ မကြာခဏဆိုသလို သွားရောက်ထောက်ခံရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲသည်လို ထောက်ခံလွန်းလို့ နအဖ ဘက်တော်သားဖြစ်ဟန်တူတဲ့ သူများနဲ့ မေငြိမ်းကိုလည်း မုန်းတီးဟန်တူတဲ့ သူများက “ကိုပေါ… ခင်ဗျား သူ့ကို ဘလိုင်းကြီး ပင့်မနေနဲ့” ဆိုတဲ့ ကွန်မင့်မျိုး အရေးခံရတဲ့အထိပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဆရာမမေငြိမ်း ဘလော့ဂ်မှာ ကျနော့်စိတ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဗလောင်းဗလဲတခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲသည် ဗလောင်းဗလဲက တခြားသူတွေကိုတော့ ထိခိုက်ချင်မှ ထိခိုက်မှာပါ။ အသေးအမွှားကိစ္စလေးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်စိတ်ကိုတော့ ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့….. အဲသည်တလောက ညီလင်းဆက်နဲ့ မေငြိမ်းတို့ “သောင်းသောင်းဖြဖြ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အစပြုလို့ ငြိကြတယ်ဆိုပါတော့။ ကျနော်က ဖေ့စ်ဘုတ်တွေ ဘာတွေအထိ တက်မဖတ်လို့ အကြောင်းစုံ မသိရပေမယ့်… အဲဒီအချိန်က ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးသူ မဒမ်ပေါအပြောနဲ့ ကိုယ်ဖတ်မိတာတွေ ဆက်စပ်တွေးကြည့်မိတဲ့အခါ အဲသည်ကိစ္စမှာ ကျနော်က မေငြိမ်းမှန်တယ်ယူဆတဲ့အလျောက် မေငြိမ်းဖက်မှာ ရပ်ပါတယ်။ ညီလင်းဆက်ကို ကျနော်ကြိုက်တာမှန်ပေမယ့် အရာတိုင်းမှာတော့ ညီလင်းဆက်နဲ့ ကျနော်ကလည်း ထပ်တူကျတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲသည်လို ညီလင်းဆက်ကိစ္စက အစပြုလို့ မေငြိမ်းရေးတဲ့ ပို့စ်တွေတိုင်းမှာ မေငြိမ်းကို မလိုလားသူများက ကွန်မင့်တွေနဲ့ အကြီးအကျယ် လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကိုလည်း ကျနော်သတိထားမိပါတယ်။ အရင်ကလည်း နအဖ ဘက်တော်သားတွေ ဒီလိုပဲ လာရောက်တိုက်ခိုက်နေကြမို့ ဆရာမမေငြိမ်းက လုံးဝ ဖြုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ကျနော်တွက်ဆထားပြီးသားပါ။ ဒီကြားထဲမှာ မေငြိမ်းက “ပေးသူယူသူ နောက်ဆက်တွဲ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ကွန်မင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူမရဲ့ သဘောထားကို ပြောရာမှာ...
“နောက်တခုက လောက်လောက်လားလား ဝေဖန်တာမျိုးလည်း မဟုတ်ကြလေတော့ မှတ်သားစရာလည်း မရှိ...။ ဒီတော့ Blog စည်တယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်တော့တယ်..။ ..................................................................... ....................................................................................... .......................................................... ကဲ... Comment ချင်ကြသေးသူများ... ကြိုဆိုပါတယ်ဗျားးးး” လို့ ရေးထားတာတွေ့ရတော့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို အလေးထားသူတယောက်အနေနဲ့ ဆရာမရဲ့ သဘောထားကိုရော၊ အဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုပါ ပိုပြီး သဘောကျမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာလိုက်ပါဘူး။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ဆရာမဘလော့ဂ်မှာ ကွန်မင့်တွေကို ပိတ်ထားတာ တွေ့ရတော့တာပါပဲ။ ကျနော်သုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ ကွန်မင့်ဖတ်မရတာကြောင့်တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ တွက်ဆရတာပဲ။
ဒီကိစ္စကလည်း ပြောရရင် သီးလေးသီး အဖြစ်တုန်းကလိုပဲ။ ဘလော့ဂါ တယောက်အနေနဲ့ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ ကွန်မင့်တွေကို ပိတ်ခြင်း၊ မပိတ်ခြင်းက သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ ဆရာမမေငြိမ်းမှာလည်း သူ့ပို့စ်ထဲမှာ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်း သူ့ဘလော့ဂ်ကို နည်းပညာအရ ကူညီပေးနေတဲ့ တပည့်သားချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ ကွန်မင့်တွေကို ပိတ်လိုက်ရတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေးရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဗလောင်းဗလဲက ကျနော့်စိတ်ကို ဘာကြောင့်ထိခိုက်စေသလဲဆိုတော့…. ဆရာမမေငြိမ်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက် စာပေစိစစ်ရေးရဲ့ ဆိုးရွားမှုကို သာမန်ဘလော့ဂါတွေထက် ပိုသိသူဖြစ်တာက တချက်၊ နောက်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို အလေးထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျနော်ယုံကြည်တာက တချက်၊ နောက်ပြီး ဝေဖန်မှုကို မကြောက်ရွံ့သူ၊ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အမှန်ကို မကြောက်မရွံ့ပြောရဲသူဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတိတ်က သူမရဲ့ အပြုအမူအပြောအဆို လုပ်ရပ်တွေကတဆင့် သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်… စတဲ့အချက်တွေကို ကျနော်သိထားတော့ ဒီကိစ္စမှာ သာမန်ဘလော့ဂါတယောက်က ကွန်မင့်တွေကို ပိတ်လိုက်ရင် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ နေမှာမဟုတ်ပေမယ့် ဆရာမမေငြိမ်းက ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျနော့်အရှိုက်ကို လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်သလို၊ စစ်မြေပြင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး တိုက်ဖော်ရဲဘော်တယောက် ကျဆုံးသွားသလို ရင်ထဲမှာ အတော်လေး အောင့်ပြီး နှမြောသတလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ရုံးပိတ်ရက်မှာ တောင်တွေးမြောက်တွေး လျှောက်စဉ်းစားရင်း ရင်ကိုလာမှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲ ဗလောင်းဗလဲ ခြောက်ခု အကြောင်း ရေးပြလိုက်တာပါ။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, July 18, 2010
စင်္ကာပူမှာ ပီအာ သက်တန်းပြည်.လို. REP သက်တန်းထပ်တိုးတဲ. အခါ နောက်ထပ် သက်တန်းကို ၁နှစ်တို. ၂နှစ်တို. ပေးပြီး တချိူ. စင်္ကာပူမှာ မနေဘဲ ပီအာ ယူထားတဲ.သူတွေ ကို သက်တန်းမတိုးပေးဘူး လို. တွေ.နေရ ကြားနေရပါတယ် ။
တချိန်ကတော. အီကြာကွေးရောင်း ပလာတာရောင်း တဲ. သူတွေကိုတောင် ဖေါရင်းတဲလန်. ဆိုပီး ပီအာတွေ ချပေး တချိူ. နိုင်ငံခြား သင်္ဘောသားတွေ ကိုခေါ်ပီး ပီအာတွေ ချပေး နဲ.
စင်္ကာပူ အစိုးရ ရဲ. အရှူးချီးပန်း လုပ်ရပ်တွေ နဲ. ကတော.
ရှေ.မှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာတော. သတိလေးနဲ.စောင်.ကြည်.ကြပါလို. ။ ။
July 18, 2010 at 12:02 PM
July 18, 2010 at 12:03 PM
မှန်လိုက်တာကိုပေါရေ..ဒီလို ထောက်ပြဝေဖန်တာကို သိပ်သဘောကျမိတယ်။ အထူးသဖြင့် သီးလေးသီး ကိစ္စပေါ့။ ကျလိကျလိဖြစ်ဖြစ်နေတာ။ ကိုပေါရေးလိုက်တော့မှ သက်သာသွားတော့တယ်။ ဘရာဗို..ဆက်ရေးပါဦးနောက်ထပ်ဘလောင်းဘလဲလေးတွေတွေ့ မြင်သမျှကို။
July 18, 2010 at 1:09 PM
Nge Naing said...
ကိုပေါရေ ကျွန်မ အလုပ်များတဲ့အခါတွေမှာ တခြားဘလော့ဂ်တွေကို မရောက်ရင်တောင်မှ ကိုပေါဘလော့ဂ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်အသစ်တင်ထားတာကို မြင်ရင် မလာဖတ်ရင် မနေနိုင်ဘူး။ အခုလည်း ဒီလိုပဲ ရောက်လာပြီး ဖတ်ဖြစ်သွားတော့ မှတ်ချက်ထည့်ဖြစ်ပြန်ပြီ။
ကိုပေါပြောတဲ့ ဗလောင်းဗလဲ ၆ ခု ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး နံပါတ် (၁) နဲ့ နံပါတ် (၃) ကိုပဲ ဗလောင်းဗလဲအထဲမှာ အကျုံးဝင်တယ်။ နံပါတ် (၂) နဲ့ နံပါတ် (၆) ကတော့ ဗလောင်းဗလဲလို့ ပြောလို့ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုတော့ သတ်မှတ်ချက်သူနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်၊ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ အချိန်ခါကြောင့်လို့ နားလည်တဲ့သူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) ကိုပေါ No Vote ကနေ Vote No ဖြစ်သွားတာက အများဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဖြစ်သွားတယ် အများဆန္ဒကို လိုက်နာလိုက်တယ်လို့ ကျွန်မက ယူဆတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ ဘလော့ဂ်တွေကို မရောက်ဖူးသေးဘူး။ မဇ္ဈိမသတင်းကို ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးရာမှာ တချို့က မဲသွားမပေးဖို့ တချို့က ကန့်ကွက်မဲသွားပေးဖို့ အမျိုးမျိုး ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလည်း မဲသွားပေးပြီဆိုတာနဲ့ ကန့်ကွက်မဲ ပေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မျက်ကွယ်ပြုရာ ရောက်ပြီး ပြည်လူလူထု ကိုယ်စားလှယ် မပါဘဲ သူတို့အလိုကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေကို အတိုင်းအတာတခုအထိ အသိအမှတ်ပြုရာ ရောက်သွားပါပြီ ဒါကြောင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်မပါဘဲ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ခေါင်းထဲမှာ လုံးဝထည့်စရာမလိုတဲ့အတွက် ဘာမဲမှ သွားပေးစရာ မလိုတဲ့ဘက်က ကျွန်မ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ရက်ကပ်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေရော NLD ပါ သဘောထားက မဲသွားမပေးရင် သူ့လူတွေထဲက ၁၀ ယောက်ပဲ သွားပေးပြီး ၁၀ ယောက်လုံး ထောက်ခံထားလို့ ပေးတဲ့လူဦးရေနဲ့ပဲ အတည်ပြုမယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်နိုင်တယ်လုိ့ ကန့်ကွက်မဲ သွားပေးကြပါဆိုတဲ့ သဘောထားထွက်လာပါတယ်။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလို အမှန်တိုင်း ကြေညာရင်လည်း ကြေညာနိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလည်း ပါနိုင်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ၇၄ ခုနှစ်တုန်းက အဖြူရော အမဲရော အကုန်လုံး အဖြူပုံးထဲ ထည့်ခံရပြီးပြီ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ လာမယ်ဆိုပြီး သတိပေးသူတွေ ရှိလျက်နဲ့ အားလုံးက ခုနကလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ တယောက်တပေါက် ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ NLD နဲ့ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေ အကြံပြုတဲ့အတိုင်းပဲ နောက်ထပ် ရေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေမှာ ကိုယ့်ဆန္ဒကို ကန့်ကွက်မဲပေးပြီးဖေါ်ပြဖို့ မှတ်ချက်ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီအပေါ်မှာ ဗလောင်းဗလဲ လုပ်တယ်လို့ လုံးဝ မမြင်ဘူး။ မိမိဆန္ဒက ဒီလိုရှိပေမဲ့ အများစုဆန္ဒက ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ မဲတွေ ပြန့်ကျဲမသွားအောင် တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင် အများဆန္ဒကို အနည်းကလိုက်နာတယ်လို့ပဲ သဘောထားတယ်။
July 18, 2010 at 3:22 PM
ဆရာမမေငြိမ်း မှတ်ချက်ပိတ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ကိုပေါက ဘလော့ဂါကောင်းတယာက် ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ ဘလော့ဂါကောင်းအင်္ဂါနဲ့ မညီဘူးလို့ ခံစားရတာက ခံစားရတာ တပိုင်းပါ။ ဒါကို နားလည်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ဆရာမမေငြိမ်းက သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သူပေးနိုင်တဲ့ အချိန်က ဒီလာက်ပဲ ရှိလို့ မှတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာကို ဒီထက်ပိုအချိန်ပိုမပေးနိုင်လို့ လုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဗလောင်းဗလဲအဖြစ် စွပ်စွဲလောက်စရာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်မမြင်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲဒီတုန်းက ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ ဆရာမမေငြိမ်း သဘောထားနှစ်ခုမှာ ကျွန်မက ကိုညီလင်းဆက်သဘောထားဘက်က ရပ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆရာမမေငြိမ်းကို မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာ ဗုံးတွေပေါက် လူတွေထိပြီး ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိ ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးလို့ အားကိုးရမှန်းမသိ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မိမိတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် ယူဆတဲ့ ပုလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူလာလာ အားတက်ပြီး ကြိုဆိုမှာ အမှန်ပဲလို့ ကိုညီလင်းဆက် ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဆရာမမေငြိမ်းပို့စ်မှာ အပြုသဘောနဲ့ သွားထောက်ပြခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုသူမှတ်ချက်တွေ ပိတ်လိုက်တာကို သဘောမကျပေမဲ့ သူဒီလောက်ပဲ အချိန်ပေးနိုင်လို့ လုပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ နားလည်လိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ တနေ့မှာ အဲလို မကြုံလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မလည်း သူများဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ချက်သွားရေးလို့ Comment Moderation လုပ်ထားရင် ကျွန်မကို တော်တော် စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စေလို့ Comment moderation လုပ်ဖို့ကို ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး။ အခြေအနေအရ လုပ်ထားရတယ် ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေကို လာတင်တဲ့သူက လာတင် ဒါကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြန်ဆဲသူ ပြောသူတွေနဲ့ မူလဘလော့ဂ်နဲ့ လုံးဝမဆိုင်တာတွေရယ် ညစ်ညမ်းတာတွေရယ်နဲ့ ပို့စ်ကို အမိုက်ပုံးဖြစ်သွားစေတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်လာလို့ ဘယ်တုန်းကမှ လုပ်မယ်လို့ မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ Approval တဆင့်ခံထားရတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခြေအနေအရ ဖြစ်လာတာတခုမှာ အဲဒီအခြေအနေကို ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ဖူးမှပဲ နားလည်တာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်မတော့ ကိုယ်မကြုံရသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတခုမှာ လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ရင့်သီးတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဝေဖန်ဖို့ မသင့်ဘူးလို့ ကိုပေါကို အကြံပြုချင်တယ်။ မှားတယ်ထင်ရင်လည်း ဘယ်သူမဆို နေရာတိုင်းမှာ သဘောထား ထပ်တူမကျနိုင်ဘူးလို့ပဲ သဘောထားစေချင်တယ်။
July 18, 2010 at 3:23 PM
Comments Phobia ရောဂါဆိုတာ ဒါမျိုးလားမသိဖူး ၊ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဖူး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်အမည်ပေးကြည့်တာ
အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်တောင် ဆွမ်းကြီးလောင်းတဲ့ အထဲမှာ ပါသေးတယ်၊ နအဖလူ ဒီမိုလူထက် ဗုံးပေါက်တဲ့ ကိစ္စကိုရေးတဲ့ ပို.စ်မှာ ကျွန်တော် သူရေးတာကို မကြိုက်လို.ပါ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မုန်းတီး၍ မဟုတ်ပါ
ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်လုပ်နေပြီးမှတော့ ကွန်.မန်.ကြောက်တယ်ဆိုတော့ ....
နောင်တစ်ချိန်မှာ ကော်မန်. ကြောက်တတ် တဲ့ အကယ်ဒမီ ဘလော့ဂါဆုအသစ်ကို တီထွင်ပြီးပေးကြပါစို.
ဘလော့ဂါများ ကွန်.မန်.ကို ကြောက်တတ် ခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ
July 18, 2010 at 6:38 PM
ကိုပေါ ဝေဖန်ထောက်ပြတာလေးတွေကို သဘောကျမိတယ်... သီးလေးသီးကိစ္စ ကိုပေါနဲ့ ထပ်တူအညီဆုံးပဲ....
July 18, 2010 at 7:51 PM
အင်းး ကိုပေါက ပြောတာဆိုတော့လည်း ပြန်ပြောပြရပါဦးမယ်။ ကိုပေါရေ.. ဗလောင်းဗလဲဆိုတဲ့အသုံးကို သုံးရင်... တစုံတယောက်က ကတိပေးထားတာကို ဖျက်မှ သုံးပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကတိပေးထားတာမဟုတ်ဘဲ အယူအဆပြောင်းတာ.. ခံယူချက်ပြောင်းတာကို စိတ်ပြောင်းတယ်ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ ဗလောင်းဗလဲလို့ မသုံးပါ။
နောက်တခု .. ဘလော့ရေးရင် ကော်မင့်လက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ Ethic လည်း မရှိပါ။ နောက်တခု အဝေဖန်ခံနိုင်တယ်ဆိ်ုတာဟာ အသားလွတ်အစော်ကားခံဖို့ အဆဲခံဖို့ကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ်ပြောရရင်တော့.. ကျမကို တကယ်တမ်း စိတ်ပါလက်ပါ ဝေဖန်ချင်သူတွေက ကျမဆီကို ဘလော့ကနေတဆင့် အီမေလ်လိပ်စာ ယူပြီး တိုက်ရိုက် အီမေလ်ပို့နိုင်တာပဲလေဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စိတ်မရှုပ်ချင်တော့လို့ (နောက်တကြောင်းက ကော်မင့်တွေကြောင့် ဘလော့အလှကို ထိခိုက်တယ် ထင်လို့) ကျမ သေချာဆုံးဖြတ်ပြီး ကော်မင့် ပိတ်ထားလိုက်တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကိုပေါက ဗလောင်းဗလဲလုပ်တယ်လို့ ဆိုတော့လည်း ဒါက ကိုပေါရဲ့ သဘောထားပဲလေ.. နော။ ကျမကတော့ အကျိုးအကြောင်း သိအောင် ပြောပြတဲ့ သဘောပါပဲ။
July 18, 2010 at 9:14 PM
ကိုပေါရေးတာတွေ ဗလောင်းဗလဲ အမှန်တွေပါပဲ..
comment ပိတ်တာကတော့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမကွာခြားချက် လို့ သဘောထားလိုက်လိုက်ပါဗျာ..
ယောင်္ကျားက ကိုယ့်ကိုလာဆဲတဲ့သူကို -ီး ဖြဲပြလို့ရပေမဲ့
မိန်းမက သူ့ရှိတာ ဖြဲပြရင် ဝိုင်းထည့်သွားကြမှာလေ..
မိန်းမ ဘလော့ကာတွေ comment တာ c box ဖြုတ်ကြတာ နားလည်ပေးလိုက်ပါဗျာ...
July 18, 2010 at 9:21 PM
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမလာခင် ဘလောဂါများရဲ့ တိုက်ပွဲ ........
ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ (ကိုပေါ နှင့် ဒေါ်မေငြိမ်း အပါအ၀င် )
July 18, 2010 at 9:38 PM
မေငြိမ်း>>>>... ဆရာမထောက်ပြတဲ့အတွက် “ဗလောင်းဗလဲ” အသုံးအနှုန်းအကြောင်းကို သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အမှန်တော့လည်း ပို့စ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ စကားမတည်တာ၊ အပြောင်းအလဲမြန်တာ၊ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး လုပ်တတ်တာ၊ အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုး လုပ်တတ်တာတွေကို ကျနော်က ဆိုလိုခဲ့ချင်တာပါပဲ။
အခုလို ဆရာမဖက်က အကျိုးအကြောင်း လာပြောပြတော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့လေ။
July 18, 2010 at 9:54 PM
အရှေ.က ပို.စ်မှာ ကျွန်တော်ကွန်မန်.လုပ်ထားတာ နည်းနည်းသက်ဆိုင်မယ်ထင်လို. ကော်ပီကူးပြီးတင်လိုက်ပါတယ် ၊ ဘယ်သူ.ဘက်မှ လိုက်ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းချရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊
" ပို.စ်တွေကို မဝေဖန်ချင်ပါဘူး ၊ ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် အတွေးအခေါ် ၊ အကြောင်းအရာ မတူနိုင်ပါ ၊ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာက ကိုယ်ပေါ ရဲ့ ကွန်.မန်.တွေကို အချက်ကျကျ ဒေါသ မပါပဲ တုန်.ပြန်တာက တကယ့်ကို ကောင်းပါတယ်
တစ်ချို. ဘလော့ဂါတွေ တကယ့်ကို အတုယူသင့်ပါတယ် (ဘလော့ဂါအားလုံးကို မဆိုလိုပါ ၊ တစ်ချို.ကိုသာ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)
တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း ကိုပေါက ဆွမ်းကြီး ၀င်လောင်းသွားတာတောင် မတုန်.ပြန်ဘူး -
သည်းငြီးခံနိုင်တယ်လို. ပြောရမလား မသိပါဘူး "
July 18, 2010 at 9:57 PM
I like this post so much.
July 19, 2010 at 8:56 AM
ရှေ့နောက်မညီတာလို့ ပြောရင်လဲရပါတယ်။ ဗလောင်းဗလဲဆိုတော့ ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။
July 19, 2010 at 10:15 AM
July 19, 2010 at 10:23 AM
အင်း.. ဖွချင်လုို့ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးလုို့ပဲ မြင်ပါတယ်.. ပုံမှန်တော့ ကုိုပေါအမြင်သက်သက် ဖြစ်တယ်.. ဘာမှရေရေရာရာ ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းလဲမရှိပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ဖွချင်တဲ့လူကုို ပွလာအောင် ကျွန်တော့်ရင်ကုို ထိတဲ့ အများကြီးထဲက တစ်ချက်လောက်လဲ ပြောပြချင်ပါတယ်.. ဟဲဟဲ..
ဘာတဲ့.. “ပိတ်ဆုို့အရေးယူမှုများကုို သူမ မတောင်းဆုိုခဲ့ပါ” ဆုိုပဲ.. အဲ.. ကုိုပေါလုို ခေါင်းစဉ်ကြီး တပ်ရမှာတော့ နဲနဲတွန့်သားဗျ.. ရှေ့နောက်မညီလုို့ပဲ မောင်သတိ နားလည် စဉ်းစားပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ..
July 19, 2010 at 10:55 AM
Agree with you on Singapore born child stay with social visit pass. My child is in same situation.We feel fustration about it but what can we do? Now we are thinking of move to other country.
July 19, 2010 at 11:05 AM
July 19, 2010 at 1:10 PM
Ko Lay said...
to သတိ ...
As far as I remember, prior to 2003, Daw Suu only called for (1) no tourist visit to Myanmar and (2) no foreign investment in Myanmar. She did not call for economic sanctions (like blocking of imports/exports). In my opinion, call for no investment and call for sanctions are two different things. If you have an evidance that she called for sanctions (i.e. used the word ပိတ်ဆုို့ ) in her speeches, pls let us know.
When she called for no investment, she hadavery valid reason. She was afraid that Myanmar's natural resources would be wasted due to mismanagement and kleptocracy (theft) by the current govenment and nothing much would be left for the next generation.
July 19, 2010 at 1:48 PM
ရွှေရတုရေးတာ တအား မိုက်ရိုင်းပါတယ်။ စာလာဖတ်တဲ့ သူတွေကို စော်ကားလွန်းရာ ရောက်၍ ပြန် တောင်းပန်စေလိုပါတယ်။
July 19, 2010 at 4:04 PM
ဟုတ်တယ်..ရွှေရတု..အရမ်းမိုက်ရိုင်းတယ်..ဒီကွန်းမန့်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်..မိန်းကလေးတွေ ဖတ်လို့မသင့်တော်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်..
July 19, 2010 at 4:36 PM
ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ comment ကိုကျေးဇူးပြုပြီး ဖျက်ပေးပါလား...သူစကားလုံးတွေက သိပ်ကိုရိုင်းလွန်းလို့ပါ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း (ကိုကြီးကျောက်)ရဲ့ ကွန်မင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့.......
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဂျောက်ဂျက်ဖက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးဖူးတဲ့ ကျနော်တောင်မှ သူ့ကွန်မင့်ကို မြင်မြင်ချင်း မျက်လုံးက လင်းကွင်းလောက် ပြူးသွားပါတယ်။ တုတ်ကြီး (တာဝတိ`ံသာ)ရဲ့ စကားနဲ့ ပြောရရင် လူတောင် ဝက်တုပ်ကွေး ဖြစ်ချင်သွားပါတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။း-)
ဒါပေမယ့် ကိုကြီးကျောက်က ဝိနည်းလွတ် ရေးထားတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ ဖရုဿဝါစာကွန်မင့်အတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိသော်ငြား... ကျနော့်မှာ သူ့ကွန်မင့်ကို ဖျက်ဖို့ရာ မစွမ်းသာဘူးခင်ဗျ။ ကျနော့်စည်းကမ်းနဲ့ ငြိဖို့ရာဆိုရင် သူ့မှာ အရေးကြီးတဲ့ အက္ခရာ တခုပျောက်နေတယ်။း-) မိုးပေါ်မှာ ထိန်ထိန်သာနေတဲ့ အက္ခရာကြီးလေ။ သူက အဲဒီ အက္ခရာ နေရာမှာ “-” သင်္ကေတလေးနဲ့ပဲ ရေးထားတယ်ခင်ဗျ။
မတော်လို့ စာဖတ်ပရိသတ်တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ကျနော်က သွားဖျက်လိုက်ရင် ကိုကြီးကျောက်က..... “ကိုပေါ....ကျုပ်ဘာရေးလို့လဲဗျ။ ယောက်ျားတွေအတွက်က (ခေါင်းဖြီးတဲ့)“ဘီး”ကို ဖြဲပြလို့ ရပေမယ့် မိန်းမက သူ့မှာရှိတာ (ပိုက်ဆံအိတ်)ကို ဖြဲပြလိုက်ရင် ဝိုင်းထည့်သွားကြမှာလေ... ရာတန်တွေ အထပ်လိုက်” လို့ ဆိုပြီး ရန်တွေ့လာဖွယ်ရှိပါတယ်။
ပြီးတော့ ဟိုအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ရေးတာဆိုရင်တောင်မှ သူ့အနေနဲ့ တကယ်တမ်းမှာ မိန်းမတွေဖက်က ကာကွယ်ပြီး ရေးချင်တဲ့သဘော သက်ရောက်လို့ အမြင်မတော်ရင် အဲဒီကွန်မင့်လေးတစ်ခုကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျော်ဖတ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျိုး။
July 19, 2010 at 8:02 PM
>>>>Ko Lay..... မောင်သတိရဲ့ ကွန်မင့်ကို ချေပထားတဲ့ ကိုလေးရဲ့ ကွန်မင့်ကို အထူးနှစ်သက်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။
July 19, 2010 at 8:10 PM
ရွှေရတု ရယ် ဒီလောက်အသုံးအနှုန်းတွေ ကြမ်းနေမှတော့ နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါလား
(ကိုယ်ပေါက ကြားထဲက၀င်ရေးပေးပေါ့ ၊ ချစ်လွန်းလို. ရွှေလကလေးလို ဥထားတာလို.)
July 19, 2010 at 8:29 PM
မောင် လေး said...
ပြောလဲ ပြောတက်ပ ကိုကိုစန်း ရယ်...
July 19, 2010 at 8:42 PM
July 19, 2010 at 9:51 PM
ဟားဟား.. ကုိုပေါဆီ တခါတလေ ကော်မန့်မိရင် အများကြီး ပြောရတတ်တာ ထုံးစံလုိုဖြစ်နေပီဗျာ.. ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆုိုင်တဲ့ အကြောင်းဆုိုတော့လဲ သိပ်တော့ များများစားစားမပြောချင်ဘူးဗျ..
ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်.. ရှေ့ပုိုင်းတွေ ကျော်ပီး အောက်နားကုို ဖတ်ပါလေ.. လူတုိုင်း လက်မခံရင်သာနေမယ်၊ သိထားတဲ့ ရှင်းနေတဲ့ ဒီကိစ္စလောက်နဲ့တော့ တပင်တပန်း ခံပီး ရှာဖွေနေဖုို့ အစီအစဉ် မရှိတာမုို့ ဒါဟာ ကျွန်တော့်မှာ အဆင်သင့် အလွယ်ရှိတဲ့.. ကူးချထားဖူးတဲ့ လင့်တစ်ခုပဲ ရှယ်လုိုက်ပါတယ်.. ဟားဟား.. တုိုက်ဆုိုင်မှုတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်ဗျ.. အကုိုမှတ်မိသလောက် ၂၀၀၃ ဆုိုတဲ့ နောက်ပုိုင်းမှာ မရှိပါလုို့ ဒီဆောင်းပါးကလဲ ဆုိုထားတဲ့အတွက် အကုိုတော့ ၀ိနည်းလွတ်တယ်လုို့ ပြောရမှာပေါ့ဗျာ..
ဒီဆောင်းပါးကိုထားပါဦး.. အကိုပြောခဲ့တဲ့ အချက်နှစ်ခု..အဲဒီတုိုက်တွန်းမှုတွေ.. လမ်းခင်းချက်တွေ.. ပီးတော့ အနောက်နုိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတုိုင်းအပေါ် တုံ့ပြန်မှုတွေ.. စီးပွားရေးဆက်ဆံတဲ့ နုိုင်ငံတွေအပေါ် ကတ်ကတ်လန်မှုတွေ.. ဒါတွေကုို ကြည့်ပီး ဘာလမ်းကြောင်းဆုိုတာ ၇ှင်းပါတယ်.. ဒါကုိုမှ ”ဟုတ်ကဲ့.. ကျွန်မကပိတ်ဆုို့ပါလုို့ တောင်းဆုိုတာ စာအတိအကျရှိလုို့လား.. တခြားပုံစံမျုိုးနဲ့ ပြောတာပဲလေ”ဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်ကုို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ရှင်းနေတဲ့ စကားတခုကုို ပုံစံတမျိုး ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းရဲ့ အင်တာဗျူးစကားနဲ့ ဘာများ ကွာပါလဲခင်ဗျာ...
ဗလောင်းဗလဲဆုိုတဲ့ စကားကုို မြန်မာဆရာမအဟောင်း ဒေါ်မေငြိမ်း အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆုိုပုံထက် ကုိုပေါ ကော်မန့်မှာ ဖွင့်ဆုိုပုံကုို ပုိုသဘောကျတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ တကယ်လုို့ ဒေါ်စုလုပ်ပုံဟာ အဲဒါမျိုးဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ ကိုပေါခေါင်းစဉ်နဲ့ အတိအကျ လုိုက်ဖက်ခဲ့တဲ့ စကားလုို့ လက်ခံရမှာပါပဲ.. ဟားဟား..
July 19, 2010 at 9:54 PM
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းအင်တာဗျူးက စကားတွေကို မောင်သတိအနေနဲ့ အခုချက်ချင်း ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးကို သွားဖတ်ရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပါးစပ်ကထွက်ကျလာတဲ့ စကားတွေပါ။
မောင်သတိခမြာမှာတော့ ကိုလေးရဲ့ ကွန်မင့်ကို ချေပဖို့ တနေကုန် တနေခန်း လိုက်ရှာတာတောင် ဒေါ်စုပြောခဲ့တယ်လို့ စွတ်စွဲနိုင်စရာ စကားကို ရှာတွေ့ခဲ့ပုံ မပေါ်ဘူးခင်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တပါးသူရေးတဲ့ “သူပြောငါပြော” စကားကို ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားကြီးသဖွယ် ကိုးကားပြနေရရှာလို့ပါပဲ။ မောင်သတိသာ ရှေ့နေအလုပ်နဲ့ အသက်မွေးရင် ထမင်းငတ်ကိန်းရှိတယ်။ အထောက်အထားမခိုင်လုံလို့ အမှုသည်ခမြာ ဒုက္ခရောက်ကိန်းပဲဗျ။း-)
ဆောင်းပါးရှင် ဒဲရက်တိုကင်ဟာ ဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာ၊ ဒေါ်စုနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်အပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားတဲ့လူလဲဆိုတာ ဧရာဝတီ အွန်လိုင်းမှာ သူရေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေ၊ အရင် FEER မဂ္ဂဇင်းကို ရေးပို့ခဲ့ဘူးတဲ့ သူ့စာတွေ (အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာတွေ)ကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ သူ့ဆောင်းပါးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စကားကို အတိအကျ ကိုးကားညွှန်းဆိုထားတာမတွေ့ရတဲ့အတွက် သက်သက် အပုပ်ချတဲ့ သဘောမျှသာ သက်ရောက်နေပါကြောင်းကို မောင်သတိတစ်ယောက် “ပညာရှိ မောင်သတိဖြစ်ခဲ” ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်သည့်အလျောက် ထောက်ပြလိုက်ရပါတယ်။း-)
July 19, 2010 at 10:15 PM
July 19, 2010 at 10:19 PM
ပေါလည်း ပေါနိုင်တဲ့ ကိုပေါ။
“လွမ်းမိုး” ကြီး ဆိုထားတာ ကိုပေါတစ်ယောက် သေပြီဆိုလို့ အဟုတ်မှတ်ပါတယ်၊ တကျွန်းကို ပြေးပုန်းနေတော့တာကိုး။
ဆရာရယ်၊ ဆရာ့ကို ခေတ်ပြိုင်မှာ မန့်ထားတာ သဘောကျလို့ ဒီကိုလိုက်လာကာမှ ယောက်မ မြင်စီးထွက်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်ဗျာ၊ ကိုယ့်ဘလော့ထဲကိုယ် စိတ်ကြိုက် လွတ်ထုတ်တော့တာပါပဲ။
ကျနော့်အမြင်က မငယ်နိုင်နဲ့ နည်းနည်း နီးစပ်မယ်ထင်ပါတယ်။
၂. ချီတုံချတုံလို့ ထင်ပါတယ်၊
၄. နိုင်ငံတိုင်း ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အဓိကထားလေတော့ အဲ .. ထားပါတော့ဗျာ၊ ထောက်ခံပါတယ်၊
၅. သီးလေးသီးကိစ္စကတော့ သတိတော့ထားမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို သံသယရဲ့ အကျိုးကလေးတော့ ခံစားခွင့် ပေးသင်တယ်ထင်ပါတယ်၊ ကိုဇာဂနာလို သွားတွေကျွတ်ရင် ကိုယ်တွေက ကျွတ်၊ ကျွတ်၊ ကျွတ် ပဲ ပြောနိုင်တာလေ၊
၆. ဆရာမ ဒေါ်မေငြိမ်းကတော့ ကိုပေါအသုံးအနှုန်း လွဲနေတယ် ထင်ပါတယ်၊ သူလည်း အလူးအလဲခံလာရတာ များနေပါပြီ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သွားနောက်မိတာတောင် နောင်တနည်းနည်းရမိတယ်၊ သူဟာ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ပါ၊ ဝေဖန်ရေးဆရာလည်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်လို့ ထုပေဒဏ်ပေ ခံနိုင်ရမယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲဖို့လည်း မသင့်လို့ ကိုပေါ အထက်က ၅ ချက်လောက်နဲ့ ကျေနပ်သင့်ပါတယ်။
July 19, 2010 at 10:29 PM
ဟားဟား.. ကုိုပေါရေ.. နဲနဲတော့ ညစ်သားဗျ.. အဲဒီဆောင်းပါးထွက်လာအောင် ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ရှာစမ်းပါဗျာ.. နဂုိုက ကူးထားဖူးတာမျုိး မရှိရင် လုံးဝထွက်မလာစေရပါဘူး.. ကျွန်တော်မောင်သတိ ကူးတဲ့နေရာမှာ တဖတ်ကမ်းခတ်သူဆိုတော့ နောင်တချိန် ပြေးကြည့်စရာမလုိုအောင် အရှည်တွေးနဲ့ ကူးခဲ့တယ် ဆုိုပါတော့ဗျာ.. ဟားဟား..
ထားပါ.. အဓိကက အဲဒီဆောင်းပါးရေးသူတွေ ဘာညာကွိကွ.. ထည့်တောင်မစဉ်းစားဘူး.. အဲဒီထဲက ဘယ်အချက်က ဖောင်းလဲ.. ဆောင်းပါးနဲ့ မဆုိုင်ပဲ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ဘယ်ကောက်ချက်က ထောက်ပြစရာရှိလဲ.. ဒါမျုိးကုိုတော့ ကိုပေါမှမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်သူမဆုို ပြောနုိုင်မယ်ဆုိုရင် တကယ့်ကုို တုန့်ပြန်ပေး မျှော်လင့်ပါတယ်.. ကုိုပေါကုိုယ်တုိုင်ရော.. ဒေါ်စုဟာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆုို့ဖုို့ တောင်းဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ မရပ်ခဲ့ဘူးလုို့ ယုံကြည်လုို့လား..
မဟုတ်ရင်တော့လဲ ကိုပေါရေ.. ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းပြောသလုို ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ပါလုို့ မပြောခဲ့တာ ဟုတ်သားဟလုို့ ပြေးပီး အဲဒီဆရာသမားကုို ၀န်ချတောင်ပန်ရင်လဲ တောင်းပန်.. ဒါမှမဟုတ်လဲ နံပါတ်နှစ် ကိုပေါဘလောင်းဘလဲ အောက်မှာ ထပ်တုိုးဆုိုပီးသာ ထည့်လုိုက်ပေတော့ဗျို့.. ဟားဟား..
July 19, 2010 at 10:30 PM
July 19, 2010 at 10:58 PM
ကိုပေါ ပို.စ်ကို ဖတ်ဖို.မျှော်လိုက်ရတာ
သိုင်းလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ -အဲလေ--မှားသွားလို.- ဘလော့ဂါ လောကမှာ နာမည်ကြီး ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ လျှမ်းလျှမ်းတောက်နေတဲ့ ကိုပေါ ၊ မောင်သတိ ၊ ဒေါ်မေငြိမ်း၊ မငယ်နိုင် နှင့် ရွှေလဥ (စားလုံးပေါင်းမှားသွားလို.) ရွှေရတု တို.လို ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဝေဖန်ချက်ကို တ၀ကြီး ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် ဆုံစည်းမူ ဖြစ်မြောက်ရေးကို ဖန်တီးပေးတဲ့ စလုံးမှာ နာမည်အရမ်းကြီးနေတဲ့ ဘလော့ဂါကြီး ကိုပေါ ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
July 19, 2010 at 11:04 PM
တကယ်တော့ ဒေါ်စုကို ဗလောင်းဗလဲလုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲတာက မောင်သတိသာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒဲရက်တိုကင်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ကိုင်စွဲပြီး စွပ်စွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။) ကျနော်စွပ်စွဲတာ မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်စွပ်စွဲချက် ခိုင်လုံစေချင်ရင် သက်သေပြရမှာကတော့ စွပ်စွဲသူ မောင်သတိရဲ့ တာဝန်သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးတွေမှာလိုပေါ့ဗျာ။ တစုံတယောက်ကို တရားခံလို့ စွတ်စွဲချင်ရင် စွတ်စွဲတဲ့ တရားလိုကပဲ ထင်ရှားအောင် သက်သေပြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။ အခုလဲ ဒီကိစ္စကို သယ်လာတဲ့ မောင်သတိပဲ တာဝန်ယူပေတော့။ ဒေါ်စု ဗလောင်းဗလဲပြောတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ထင်ရှားအောင် သက်သေပြပေတော့။
ကျနော့်သဘောထားကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောရရင် ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ အခုအချိန်အထိ Sanction ကို ထောက်ခံတယ်ဗျိုး။ Sanction ထောက်ခံသင့် မထောက်ခံသင့် ငြင်းကြရင် ကျနော်တော့ တောက်လျှောက်ပဲ ထောက်ခံခဲ့တယ်။
ဒါထက် ကိုသတိတို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေနဲ့တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Sanction ရုတ်သိမ်းဖို့အတွက် အကူအညီပေးမယ် ကမ်းလှမ်းတာကိုတောင် လက်မခံနိုင်လောက်အောင် အတ္တကြီးနေတာတော့ အံ့သြစရာပဲဗျိုး။
July 19, 2010 at 11:15 PM
ရွှေလဥ အဲလေ ရွှေရတု ရဲ့ ကော့မန့် မပိတ်ပါနဲ့
ဒါမှ ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာ လူသိမယ်
July 20, 2010 at 4:46 AM
ဘကျောက် ဂိုင်စိကွေး said...
အမျိုးသမီးတွေ ဒီမှာလာရေးနေကြနော်။ ကိုပေါက ဘကျောက်ကို ထောက်ခံတာ။ သူ့တို့ဟာကြီးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ဟာထဲ ထည့်ထားခံနေရအုံးမယ်။
ညစ်ညမ်းအသုံးအနုန်း ခွင့်ပြုထားတဲ့ဘလောက်မှာ ခပ်ညစ်ညစ်ပဲရေးသွားတယ်ကွာ။ _ီးဖြစ်လား။
July 20, 2010 at 10:51 AM
ကိုကြီးကျောက်ရေးတာ ငါ့နှမများက မိုက်ရိုင်းတယ်ထင်ရင် စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကိုကြီးကျောက်က မိန်းကလေးဆိုတာ အစစ ပြိုင်မိုက်ရိုင်းလို့ မရတော့ comment, c box ဖြုတ်ကြတာ ကိုပေါအနေနဲ့ နားလည်ပေးဖို့ ပြောတာပါ၊
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောပါရစေ၊ ကိုပေါကိုလဲအားနာစွာတောင်းပန်ပါရစေ...
July 20, 2010 at 11:52 AM
July 20, 2010 at 3:37 PM
ကိုကိုစန်း အောက်တန်းကျကျ ကလိသလို ရိသလို စာတွေနဲ့ လူများဘလော့မှာ ဝင်ပြီး မမန့်ပါနဲ့ သတိကိုလည်းပြောချင်ပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗလောင်းဗလဲ လုပ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစကားမျိုးနဲ့ ဗလောင်းဗလဲ လုပ်သလဲ သက်သေနဲ့တကွပြောပါ.. အာဏာရူးကြီးတွေလို နေ့တမျိုးညတမျိုး ကိုယ့်စကားကိုယ်မတည်ပဲ ဗလောင်းဗလဲ လုပ်တာကမှ တကယ့်ဗလောင်းဗလဲပါ..
July 20, 2010 at 3:42 PM
ခပ်ရိုင်းရိုင်း မန်.တဲ့ သူဘက်က နာတယ်ပေါ့
သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ.လွေ.ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့ ၊
မှန်တာပြောလို. အနာပေါ်တုတ်ကျလဲ မတတ်နိုင်ဖူး
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ကွန်.မန်.ကို ကျွန်တော်နဲ. ဘလော့ဂါပိုင်ရှင် ကိုယ်ပေါ ဘဲ ဖျက်လို.ရတယ် ၊ ခင်ဗျား က ကျွန်တော့် ကွန်မန်. ကိုဖျက်စေချင်ရင် ကိုပေါ ကို စည်းရုံးကြည့်ပေါ့ ၊ မှန်တယ်ထင်လို.ရေးတဲ့ စာကို ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်တော့မှ မဖျက်ဖူး
ကျွန်တော်ကတော့ မှန်တယ်ထင်ရင် မန်.မှာပဲ
July 20, 2010 at 8:43 PM
တော်ရုံ ကွန်မင့်တွေကို စကားလုံး အသုံးကြမ်းရုံ၊ တစ်တစ်ခွခွပြောရုံနဲ့ မဖျက်ဘူးလို့ ကျနော့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ထားလို့သာ မဖျက်တာပါ။
ကိုကြီးကျောက်ကွန်မင့်ကို ရိုင်းတယ်လို့ ပြောကြသူတွေအနေနဲ့ ကိုကိုစန်းရဲ့ ကွန်မင့်ကိုလည်း ညီတူညီမျှ ရိုင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြရမှာပါ။ အဲသည်လို မဟုတ်ဘဲ ကိုကြီးကျောက်ကို တမျိုး၊ ကိုကိုစန်းကိုတော့ တမျိုးဆိုရင် အဲသည်လူတွေကိုလည်း ဗလောင်းဗလဲ စာရင်းထဲကို ထည့်သွင်းရမှာပါ။
ကျနော့်အနေနဲ့ရော.... ဒီကွန်မင့်တွေအပေါ် ဘယ်လို သဘောရသလဲ။ ရိုင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်သလား။ မရိုင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်သလား။
ကိုကြီးကျောက် ကွန်မင့်ဟာ တစ်တစ်ခွခွ နိုင်ပေမယ့် ယုတ်မာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ သူဥပမာပေးပုံကသာလျှင် တစ်တစ်ခွခွ နိုင်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ရှားအောင် နည်းနည်းထပ်ရှင်းပြရရင်....
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းထဲက “ပြဲနေအောင်လုပ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး။ စောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ဖို့လိုပြီဆိုတာမျိုး။ ဂျပန်တွေက တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငါတို့ ဗမာတမျိုးသားလုံးကို (.......)သွားပေမယ့် ဆီဆွတ်သွားလို့တော်သေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်တက်လာရင် ဆီမဆွတ်ဘဲ (.........)လိမ့်မယ် ” ဆိုတဲ့ အပြောအဆိုတွေနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်အောင် လူနားလည်လွယ်အောင် ပြောသွားတာပါ။ တစ်တစ်ခွခွနိုင်သော်လည်း ယုတ်မာတဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သဘောဆိုးနဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ကိုကြီးကျောက်ကလည်း ဒုတိယကွန်မင့်မှာ သူရှင်းပြတဲ့အတိုင်း မိန်းမဘလော့ဂါတွေ စီဘောက်ပိတ်တာ၊ ကွန်မင့်ပိတ်တာကို နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ကာကွယ်ပြောကြားခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ နစ်နာစေတော့လို့ ဦးတည်ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ အသုံးအနှုန်းတစ်တစ်ခွခွနိုင်သော်လည်း စေတနာအားဖြင့် ယဉ်ကျေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကိုကိုစန်းရဲ့ ကွန်မင့်ကျတော့ တဖက်မှာ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ အသုံးကြမ်းပုံကို ဝေဖန်ချင်တာ၊ သရော်ချင်တာမှန်ပေမယ့် ကိုကြီးကျောက်ကို တွယ်ချင်တဲ့၊ ထိခိုက်စေချင်တဲ့ စေတနာလည်း အတန်အသင့် ပါနေတာ ငြင်းလို့မရပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်တဲ့သဘောလည်းပါတဲ့အတွက် ကျနော် မဖျက်ဘဲ လွှတ်ပေးထားတာပါ။ လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်တာ၊ သရော်တာ၊ တွယ်တာ၊ ချိတ်တာ၊ စောင်းတာ၊ ထေ့တာ၊ ငေါ့တာ အကုန်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
ကျနော် ဖျက်လိုက်တဲ့ မှတ်ချက်တခုရှိသေးတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ကိုကြီးကျောက်နဲ့တကွ မဆိုင်တဲ့ (ကိုကြီးကျောက်ရဲ့)အမေ၊ အဒေါ်၊ အမတွေကို ထင်ကြေးနဲ့ မဆီမဆိုင် သိမ်းကြုံး စော်ကားထားတဲ့ ကွန်မင့်ပါ။ သူ့ကွန်မင့်မှာ တစ်တစ်ခွခွ ရေးထားတာ တလုံးမှ မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စေတနာအားဖြင့် တဖက်သားကို နစ်နာစေချင်နေတယ်။ စေတနာအားဖြင့် ရိုင်းစိုင်းနေတယ်။ လုပ်ရပ်အားဖြင့် ရိုင်းစိုင်းနေတယ်။ အဲသည်ကွန်မင့်မျိုးကို အချိန်ရတာနဲ့ ဖျက်ပစ်ပါတယ်။
နောက် “ကိုကြီးကျောက် ဂိုင်စိကွေး” ဆိုတဲ့သူရဲ့ ကွန်မင့်ကလည်း ကိုကိုစန်းရဲ့ ကွန်မင့်နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် ဆင်တူပါတယ်။ ကိုကိုစန်းနဲ့ ဂိုင်စိကွေးလုပ်ရပ်က ဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုရင်..... “ @#$% မသားတွေ။ မင်းတို့အမေက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဖို့ သင်မပေးခဲ့ဘူးလားကွ။ *&@# မသားတွေ။ အမိယုတ်သောသား နှုတ်အာကြမ်းတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလားကွ။”.... လို့ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်က ငါတွေချင်း မိုးမွှန်အောင်ဆဲဆိုရင်း သူတပါးကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောဖို့ ဆဲဆိုဆုံးမနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ကွန်မင့်လုပ်သူအချင်းချင်း နစ်နာအောင် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆဲဆိုတာမျိုးဆိုရင် အဆဲခံရသူကို ထောက်ထားသောအားဖြင့် ဖျက်ပေးတတ်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဆဲတာဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးထားပါတယ်။
July 20, 2010 at 9:41 PM
ကိုကြီးကျောက် ဆိုတဲ့ သူရဲ့ ကွန်.မန်.ကို ၂တန်း ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ကို အဲဒီအသုံးအနှုန်းကို ကွပ်လပ်ဖြေခိုင်းရင် ကလေးကတောင် သိပါလိမ့်မယ် ၊
ကိုပေါကတော့ ခင်မင်ရင်းစွဲရှိတဲ့ ဘလော့ဂါကို ကာကွယ်ပေးနေတာတော့ ကိုပေါရဲ့ သဘောထားဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောလိုတော့ဖူး ၊
ဒေါ်မေငြိမ်း တို.လို ဘလော့ဂါ တွေက နအဖကို ဝေဖန်ပြီး သူတို.ကို ပြန်ပြီး ဝေဖန်မှာကိုတော့ သေမလောက်ကြောက်တဲ့ လူစားမျိုးတွေ၊
ကိုကိုကြီးတို. မင်းကိုနိုင် တို.ကို ပြည်ပက ဘာလုပ်ညာလုပ်နဲ. အော်တဲ့သူတွေနဲ.စာရင် ပိုပြီးလေးစားတယ်ဗျာ
နအဖ ကို ပြောရင် သူတို.နဲ.ပတ်သက်တဲ့ အသိုက်အ၀န်းကလည်း ပြန်ပြီးရေးမှာပဲ ၊ အဲဒါကို မခံနိုင်ရင် နအဖ မကောင်းကြောင်း မရေးကြရုံဘဲရှိတယ် ၊ သူများကိုဝေဖန်ရင် ကိုယ်ဘယ်လောက် အဝေဖန်ခံနိုင်တာကို သိကြဖို.ကောင်းတယ် ၊ သူတို.ဘက်က ကြည့်လည်း သူတို.က တရားတယ်ထင်မှာပဲ ၊ ကိုပေါ က တော့ အဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့ အထဲမှာပါနေလို. မပြောတော့ပါဖူး
နအဖ ဘက်ကလိုက်ပြီးရေးတယ်ထင်လည်း ကျွန်တော့် ကွန်.မန်.ကို ဖျက်လိုက်ရင်လည်း ရတယ်
ဒေါ်မေငြိမ်းလို ဘလော့ဂါတစ်ယောက် လုပ်နေပြီးတော့မှ လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ ကွန်.မန်.ကိုကြောက်တာ ဒီတစ်ခါပဲ တွေ.ဖူးသေးတယ်
သူ.ဘလော့မှာရေးလို.မရလို. ကိုပေါ ရဲ့ ဘလော့မှာလာရေးတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ
July 20, 2010 at 9:52 PM
regarding ဘကျောက် case ၊ မောင်ပေါ အတွေးအခေါ်ကလည်း သောက်တလွဲပါလား။ လက်ခံတဲ့သူ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ သိချင်တယ်။ စကားတတ်တိုင်း လှည့်ပတ်ပြောနေသလား။ face the truth. Ba Kyauk insulted women. You agreed it. Meaning both of you insulted women. You two are in common. That's why...there isasaying goes.........for you two. သူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွှေ့လွှေ့ပေါင်းဖက်တွေ့၏။ တဲ့။ အသိုင်းအဝိုင်းကျဉ်တာ ခံရမယ့်လူစားမျိုးတွေပဲ။ရွံပါ့။
July 20, 2010 at 10:06 PM
“ကိုပေါကတော့ ခင်မင်ရင်းစွဲရှိတဲ့ ဘလော့ဂါကို ကာကွယ်ပေးနေတာတော့ ကိုပေါရဲ့ သဘောထားဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောလိုတော့ဖူး ၊” (ကိုကိုစန်း)
ဘုရားရေ.... ဇွတ်ကြီးပါလား။ ကိုကြီးကျောက်ကို ကျနော် လူချင်းမသိပါဘူးဗျ။ သူ့ဘလော့ဂ်ကိုတောင် ပုံမှန် သွားဖတ်ဖြစ်တာ မကြာသေးဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ... သူတို့ တောဖက်ကို ကွင်းဆင်းပြီး တိုင်းရင်းသူကောင်မလေးတွေကို နှုတ်ဆက်ပုံတမျိုးနဲ့ နှုတ်ဆက်ကြပုံ ပို့စ်က စပြီးတော့မှ ရယ်လည်းရယ်ရ၊ အပြောလည်းကောင်းလို့ ပုံမှန်လိုလို သွားဖတ်ဖြစ်တာပါ။
သူကလည်း ကျနော်သတိထားမိသလောက် ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ကွန်မင့်လာလုပ်တာ ဒါနဲ့ပါဆိုရင် သုံးလေးခါလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူ့ဘလော့ဂ် အညွှန်းလင့်ခ်ကိုတောင် တနေ့ကမှ ထည့်လိုက်တာ။
ပြောရရင် ကိုကိုစန်းနဲ့ကမှ အများကြီး ပိုရင်းနှီးပါသေးတယ်။
သိစေချင်တဲ့ နအဖ စေတနာ said...
နအဖကို ကျတော့ ဘာလေးညာလေး ဟုတ်လားမောင်ပေါ။ အမျိုးသမီး ဘလောက်ဂါတွေကို စော်စော်ကားကားပြောပီးမှ ဘကျောက်ရဲ့ စေတနာအမှန်က ဒီလိုလေးပါ ဟိုလိုလေးပါ နဲ့ လှည့်တတ်ပုံများ။ နအဖက အဘခေါ်ရလောက်တယ်။
July 20, 2010 at 10:14 PM
ခင်ဗျား profile ကိုက http://www.blogger.com/profile/17210082622524990437 ဒီလိုပဲ ပြနေလို့ anonymous နဲ့ ရေးလိုက်ရပါတယ်။ ခင်ဗျားက တကယ့်ကို ဆိတ်သေနင်္ဂဗျူဟာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်လို့ ဟိုဖက် ပြေးကပ် ဒီဖက်ပြေးကပ်တဲ့သူပဲဗျ။ တစ်ဖက်ဖဲ့မရရင် ရတဲ့ဖက်ပြေးဖဲ့တာပဲ။
July 20, 2010 at 10:21 PM
ကိုကြီးပေါ ညီလေးမောင်ခေါ သတိတရစာရေးလိုက်ပါတယ်။ အကို့သမီး ကျနော့်ချစ်တူမ ပူတူးတူးလေး နေကောင်းလား။ အော် ဒါနဲ့ ရွှေရတုမှတ်တမ်း ရဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းကျိူးဆောင် comment လေးကြိုက်မိသဗျား။ တူမလေးကြီးလာလို့ အချိုးမပြေလို့ကတော့ တူမလေးရေ ဦးလေးခေါ တစ်တစ်ခွခွဆိုဆုံးမ ရလိမ့်မယ်။ အကို့သမီး ကျနော့်တူမလေး ကျနော်တို့ရဲ့ စေတနာတွေကို နားလည်မှာပါလေ။
July 20, 2010 at 10:49 PM
မနေ.က မန်းကိုကို ညွှန်းလို. ခေတ်ပြိုင်က "ဒင်းလိုလူစားသတိထားဟေ့" 26-07-10 ဆောင်းပါးမှာ ကိုပေါ ရဲ့ ကွန်.မန်.ကို သွားဖတ်ကြည့်ပါတယ်
ကိုပေါရဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးပိုင်ခွင့်ကို ဘယ်သူ.မှတားလို.မရပေမဲ့
အင်း ... ကိုပေါ က ဂဠုန်ဦးစော လို လူမျိုးဘက်ကတောင် ကာကွယ် ပြောဆိုနေတော့မှ ကိုကြီးကျောက် ဆိုတဲ့သူကို ကာကွယ်ပြောနေတာ မဆန်းဖူးလို. သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်
ကိုပေါ ရယ် .......
ကျွန်တော်လည်း ခုတလော ကိုပေါ ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရပါတယ်၊ ကိုပေါ နေကောင်းပါရဲ့လား
ကျွန်တော်လည်း ကိုပေါ ကို ခင်ပါတယ် ခင်မင်ရင်းနှီးလက်စနဲ. ကိုပေါ ကို ကျွန်တော် မဝေဖန်တော့ပါဘူး ၊
ဒါပေမဲ့ အထက်ပါ ဆောင်းပါး နှင့် ကိုပေါ ရဲ့ ကွန်.မန်.ကို စာဖတ်သူများ က ကွန်.မန်.ရေးလာခဲ့ရင်တော့ ကိုပေါပဲ ရှင်းလိုက်ပေတော့၊ ကျွန်တော်ကတော့ စာညွှန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ
ခပ်ညံ့ညံ့ Anonymous (july 20, 2010 10:49 PM)ငပေါညံ့လွန်းလို့ example တွေ ပေးနေရတာကွ ငတုံးရ။
July 20, 2010 at 10:55 PM
ငပေါညံ့လို့ဆိုတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အရမ်းထက် အရမ်းတော် အရမ်းကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ လေ့လာချင်လို့ ဖတ်လို့ရမယ့်လင့်ခ်လေးပေးခဲ့ပါဗျာ...
July 20, 2010 at 11:01 PM
ဒေါ်စုကလည်း သိဟန်တူတယ်။ သူ့ followers တွေက အတွေးအခေါ် သိပ်မဟန်ဘူးဆိုတာ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုကိုနအဖ ဟာလည်း သက်းဆိုးရှည်ချင်တိုင်း ရှည်နေပါတော့သတဲ့။ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ ရှင်..အဲ..ခင်းဗျား။
July 20, 2010 at 11:04 PM
အမြင်မတော်သူ သို. .......
ခင်ဗျား ရဲ့ နှပ်ချေးအတွေးလေးနဲ.လာမရေးနဲ.
မောင်သတိ တို.လို အချက်ကျကျရေးဗျာ
ကျွန်တော်က ဘယ်ဘက်မှ ပြေးမကပ်ဖူး
နအဖ ဆီက ပါမစ် မရသလို မိုးသီးဇွန် တို.လိုလည်း နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြပြီး လုပ်စားနေတဲ့သူမဟုတ်ဖူး.
ကိုပေါ တို.လို ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်ကျောင်းနေပြီး ဝေဖန်ရေးတွေ ရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို လေးစားတယ် သူတို.နဲ.တော့ အမြဲတမ်း အမြင်ချင်း ထပ်တူကျချင်မှကျမယ်၊
နအဖ မကောင်းရင် နအဖ မကောင်းကြောင်း ရေးမယ်၊ ဒီမိုဘက်တော်သားတွေ မကောင်းဖူးထင်ရင် မကောင်း ကြောင်းပြောမယ်၊
ကျွန်တော်ကွန်.မန်.တွေကို ကိုပေါ နှင့် မငယ်နိုင် ဘလော့မှာ သွားဖတ်၊ ကြောက်ပြီးလို.တော့ ကျွန်တော့်ကွန်.မန်.ကို ဘယ်တော့မှ မဖျက်ဖူး၊
နှစ်ဖက်စလုံးနဲ. ထိပ်တိုက်တွေ.နိုင်မယ် ဆိုတာ လည်း တွေးမိပါရဲ့
ဒီလိုရေးရဲတယ်ဆိုတာ အချဉ် မဟုတ်ဖူးဆိုတာကိုတော့ သဘောပေါက်
July 20, 2010 at 11:17 PM
အချဉ်မဟုတ်တဲ့ ကကစ သို့...
ကြားဖူးတယ်ဗျ... ခဏခဏပဲ.. ဘယ်နားမှာပါလိမ့်... နေရာတွေများလို့ မမှတ်မိတော့လို့ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ... ဘာတဲ့...
မင်းကဘယ်လောက်လုပ်ဖူးလို့လဲ??? ထောင်ကျဖူးလို့လား??? တောထဲနေဖူးလို့လား???
စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လား? အပေါ်မှာမေးထားတာ အကုန်ဘာမှ မလုပ်ဖူးပါဘူးဗျာ။ သာမာန်မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အာဏာရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဖားပြီးဘာမှ မလုပ်ချင်လို့ ပြည်ပထွက်လာပြီး ကိုယ့်ပညာနဲ့ ကိုယ်လုပ်စားနေတဲ့သူပါ။
ဒေါ်လာစားပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ထောက်ပံ့စာ စားနေတဲ့ဒေါ်လာစားတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ်အသုံးမကျရင် ချက်ချင်းအလုပ်ပြုတ်သွားပြီး ပြည်တော်ပြန်ရမယ့် ဒေါ်လာစား (ခင်ဗျားပြောသလို ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာ)။
ခင်ဗျားကို ဆိတ်သေနင်္ဂဗျူဟာကျွမ်းတယ်လို့ ပြောတာက ပထမ ရွှေရတု ကောမန့်ကိုဖဲ့နေရာက ဒေါ်မေငြိမ်းဖက်ကို လှည့်သွားလို့ မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြောတာပဲဗျ။
အတိအကျပြောရရင်တော့ ဒီကောမန့်ကြောင့် ခင်ဗျား ဦးတည်ရာလှည့်သွားတယ်လို့ ပြောတာပဲ...
<<<ဒေါ်မေငြိမ်းလို ဘလော့ဂါတစ်ယောက် လုပ်နေပြီးတော့မှ လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ ကွန်.မန်.ကိုကြောက်တာ ဒီတစ်ခါပဲ တွေ.ဖူးသေးတယ်
သူ.ဘလော့မှာရေးလို.မရလို. ကိုပေါ ရဲ့ ဘလော့မှာလာရေးတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ>>>
အထက်ပါစာကြောင်းတွေကို ကျနော်နားလည်လိုက်တာကတော့ ခင်ဗျားက ဒေါ်မေငြိမ်းဖက်ကို ဖဲ့ဖို့ လှည့်သွားတာပဲ။ ကျနော့် မြန်မာစာညံ့လို့ နားလည်မှု လွဲသွားတယ်ဆိုလည်း ထောက်ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။
July 20, 2010 at 11:37 PM
ကျွန်တော်ဟာ ဒီလို ဘလော့ဂ်တွေ ၊ ကွန်မင့်တွေကို ဖတ်ဖူးပေမယ့် တစ်ခါမှ ဝင်မရေးခဲ့ပါဘူး ။
မေငြိမ်း ဆိုတာ လူလတ်ပိုင်း တော်တော်များများက သိကြတဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ပါ ၊
သူ့ကို ဝိုင်းရေးကြတဲ့လူတိုင်းကို ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါရယ်လို့ မသိကြပါဘူး ၊
သူက ပြန်ရေးရင်တော့ လူတိုင်းက သြော် သူက ဒီလိုပါလားလို့ မြင်လွယ်ပါတယ် ၊
အများက သိသူ နဲ့ မသိသူကြားမှာ ခြားနားချက်တွေ တော်တော် များပါတယ် ၊
ကျွန်တော်ဟာ စာရေးဆရာလောက တစ်နည်းအားဖြင့် မီဒီယာလောကနဲ့ မစိမ်းသူမို့ စာရေးဆရာလောကနဲ့ မီဒီယာလောကထဲမှာလည်း မပြည့်တဲ့အိုး တွေ အများကြီးဆိုတာ သိပြီးသားပါ ၊
ဆင်းရဲမွဲတေ စုတ်ပြတ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် လမ်းမှန်ရောက်စေရေး
လူငယ်များ သမိုင်းအမှန်တရား သိစေရေးတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အချိန်ပိုပေးကြပါစို့လား ၊
ကြုံလို့ပြောရရင် ကျွန်တော်ဟာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ရုံးချုပ် ( ဒေါ်စုအိမ်နဲ့ တစ်ခြံကျော်မှာ ) ဘဝကို ပေးဆပ်ခဲ့ဘူးသလို အဲဒီအိမ်ရှင်က ဆက်မငှားတော့လို့ ရွှေဂုံတိုင် တိုင်းရုံးကို အခက်အခဲများစွာကြားကနေ ဝိုင်းဝန်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသေးသူတစ်ဦးပါ ၊
ဒေါ့ဂျစ်တောင် ငှားမရတဲ့ အဲဒီတုန်းက အဖြစ်ဟာ ကြေကွဲစရာကောင်းသလို ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ရွှေဂုံတိုင်ရုံးထဲတောင် ခင်ဗျားဘယ်သူလဲ မဝင်ရဘူးလို့ ချာတိတ်တစ်ကောင်က အပြောခံရတဲ့နေ့ကတော့ အပေါက်ကွဲဆုံးနေ့ပါပဲ ၊
ဒေါ်စု ပထမဆုံး အကျယ်ချုပ် ကျခံရပြီး ရုံးချုပ်ကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကနေ ရွှေဂုံတိုင်ကိုပြောင်း ခေတ်မကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းက အဲဒီကောင် ဘယ်ရောက်နေတာပါလိမ့် ၊
သုံးရောင်ခြယ် နဲ့ ရုံးချုပ်အဖွဲ့ အကြောင်း ကြုံရင်ပြောပါဦးမယ်
July 21, 2010 at 2:00 AM
To Mg Thati,
Answer Please what ko paw asked to you last question?
Chee Brain Mg Thati.
July 21, 2010 at 2:43 AM
သူများကို Comment phobia ဆိုတဲ့ ကိုကိုစန်းတစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်က Commentaholic ဖြစ်နေတာကို မသိရှာပဲကိုး..
ပထမတော့ သူ့ ထုံးစံတိုင်း ကိုပေါကို ဖားပြီး မန့့်ရာကနေ ကိုပေါက သူ့ comment ဝေဖန်တာနဲ့ 
((ကျွန်တော်လည်း ခုတလော ကိုပေါ ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရပါတယ်၊ ကိုပေါ နေကောင်းပါရဲ့လား)))
((((ကျွန်တော်လည်း ကိုပေါ ကို ခင်ပါတယ် ခင်မင်ရင်းနှီးလက်စနဲ. ကိုပေါ ကို ကျွန်တော် မဝေဖန်တော့ပါဘူး )))
(((ကျွန်တော်ကွန်.မန်.တွေကို ကိုပေါ နှင့် မငယ်နိုင် ဘလော့မှာ သွားဖတ်၊ ကြောက်ပြီးလို.တော့ ကျွန်တော့်ကွန်.မန်.ကို ဘယ်တော့မှ မဖျက်ဖူး၊
ဒီလိုရေးရဲတယ်ဆိုတာ အချဉ် မဟုတ်ဖူးဆိုတာကိုတော့ သဘောပေါက်)))
July 21, 2010 at 10:47 AM
ကိုကိုစန်းကို မငယ်နိုင် ဘလောဂ့်မှာလဲ တွေ့ ပါ့။ နှစ်ယောက်သား အတိုင်ဖေါက်ညီညီနဲ့ပဋိကတ် သုံးပုံ ၁၀၀ % မမှန်ဘူးဆိုပြီး "အ၀ီဇိသွား တောလား " လုပ်နေတာ။ နောက်ဆုံး အမြင်မတော်လို့ ပြောသူတွေ လက်လျှော့သွားတာကို အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီး နှစ်ယောက်သား အောင်ပွဲခံပြီး ကျန်ခံကြတာ တွေံ့လိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ဘော်ဒါကြီး ငယ်နိုင်လဲ ကော်မန့် တွေ ပိတ်တာ ထည့်ပြောဦးလေဗျာ..
Ko Ko San confessed that it seem to be commentphobia himself, do not accuse other.
I see Shweyadu U P Naing used uncivilized words when tried to protect Daw May Nyein.
For me, I got big laugh synonym of Shweyadu by humour sense of Ko Ko San.
It is common someone get high tone along with high tempo.
Please comment with gentle words as being of cultured peoples of Myanmar.
July 21, 2010 at 1:41 PM
I do appreciate present and most of your liberal and outspoken posts, however your comment in the New Era brought some words to say that you tried to differentiate U Saw private manner and his career achievement same as Htet Htet Moe Oo.
My opinion, It could not draw the same category between pop star and politician.
I do realize politicians are not cent percent purified man, but they need to fulfill essential ethics (i.e. do not lie, do not commit adultery).
Personal Ethic is most important thing for public leader who has to guide every of his followers (U Saw failure wasaconspicuous event). Everyone knows that evenawell established democracy country, such sandals give way the politicians to down drain. Affair of US president Clinton and Monica led to huge suffered and failure to democratic party in next election as consequences.
Still appreciate democracy practicing in Padaukyeik,agentle remind to all is to be used civilized words not to slander others.
Thanks for Shweyadu's aplology too.
July 21, 2010 at 2:47 PM
ကျွန်တော် ဒေါ်မေငြိမ်း ကို ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဗုံးပေါက်တဲ့ ကိစ္စနှင့် စပြီးဝေဖန်တာပါ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ယခုတိုင် မမုန်းတီးပါ၊ ဆက်စပ်နေလို. ဒေါ်မေငြိမ်း ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်၊ အရင်ကတော့ ကျွန်တော်အမည် မသိအနေနဲ. တစ်ချို.ဘလော့တွေမှာ ရေးဖူးတယ်၊ အဲဒီ့ သင်္ကြန် ဗုံပေါက်တဲ့ကိစ္စ ကိုဝင်ရေးချင်တော့ ဒေါ်မေငြိမ်းဘလော့က အမည်မသိလက်မခံလို. ကျွန်တော် အမည်တစ်ခု ကောက်ယူပြီး ရေးလိုက်ရတာပဲ ၊ နာမည်တစ်ခုရလာ တယ်ဆိုပါတော့
Htin သို. .......
ကျွန်တော်ကိုပေါကို မဖါးပါဘူး၊ ကျွန်တော် သူ.ကို ပွဲ နှစ်ခုမှာတွေ.ဖူးပါတယ်၊ လက်ဘက်ရေဆိုင်တောင် အတူတူမထိုင်ဖူးပါ၊ သူလက်ဘက်ရည်တိုက်ခဲ့လို. ကျွန်တော်ဖါးနေရင်တော့ပြောနိုင်ပါတယ်၊
ထက်ထက်မိုးဦး နဲ. ဦးအောင်ဆန်းဦး ကိစ္စမှာပါ၊ တော်တော်ငြင်းခုံ ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ယေဘုယျအား
ဖြင့်တော့ သူတို.ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို လေးစားပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့်တော့ သဘောထား မတူညီနိုင်ပါဘူး၊ ကိုပေါ နှင့် မငယ်နိုင်ဘလော့မှာ ကွန်မန်.မရေးရရင်လည်း ကျွန်တော့်အတွက်ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး၊ မငယ်နိုင် နဲ.လည်း ကိစ္စတစ်ခုမှာ အမြင်ချင်းမတူခဲ့ပါဘူး၊ဒါပေမဲ့ ဘာမှ ပြဿနာ အကြီးကြီး မတက်ခဲ့ပါ၊ ဘာသာရေး အငြင်းအခုံမှာ ဘယ်သူမှ မနိုင်ပါ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆက်ပြီးမငြင်းတော့ပါဘူးလို. ပြောလိုက်မှ ကွန်မန်.တွေရပ်သွားတာပါ၊
ကိုပေါ နှင့် မောင်သတိ အပြန်အလှန်ရေးတဲ့ ကွန်မန်.မှာ ကျွန်တော် ညဏ်မမီလို.၀င်မဆွေးနွေးခဲ့ပါဖူး၊ Sanction ကိစ္စကိုတော့သိတယ်၊ အချက်အလက် reference ကို ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာမရှိလို. ၀င်ပြီးမဆွေးနွေးပါ၊ ဘေးကနေ ဗဟုသုတရယူပါတယ်၊
Thu သို. ......
ကွန်မန်.ကို ကြောက်တယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်မငြင်းလိုပါဖူး၊ ဒီမိုဘက်ကရေးရင် နအဖ ဘက်ကတိုက်မယ်၊ နအဖ ဘက်ကရေးရင် ဒီမိုဘက်ကတိုက်ခိုက်မယ်၊ ကျွန်တော်က ၂ဘက်စလုံးကို ကိုယ်မှန်မယ်ထင်လို.ရေးတာ ရန်ပိုများတာပေါ့၊ မတတ်နိုင်ဖူးလေ၊ ကွန်မန်. စပြီရေးကတည်းက ဒါတွေကို တွေးပြီးသားပါ၊
ခင်ဗျားရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုချက်ကို ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်၊
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သတိမထားမိတာ ဘေးကမြင်တဲ့သူ ထောက်ပြတာကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်၊ ကျွန်တော့် အသုံးအနှုန်းမှာ ဒေါသပါသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ၊
ကျွန်တော်နဲ. အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေ ကိုပေါဘလော့ကို အလည်ရောက် လာတာကိုတော့ ကိုပေါ ပဲ အိမ်ရှင်အနေနဲ. ကြည့်ရှင်းလိုက်ပါ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ဧည်သည်ဆိုတော့ မောင်သတိ ကို အတုယူပြီးပြေးသင့်ရင် ပြေးရမှာပဲ
ကျွန်တော် ပို.နေကျ မေတ္တာတောင် မပို.ဖြစ်တာကြာပြီ၊ ကဲခုတော့ပို.လိုက်ဦးမယ်
July 21, 2010 at 4:51 PM
ခင်ဗျားရဲ့ဘော်ဒါကြီး ငယ်နိုင်လဲ ကော်မန့် တွေ ပိတ်တာ ထည့်ပြောဦးလေဗျာ..))))))
ကျွန်မ Comment တွေကို ဘယ်တုန်းကမှ မပိတ်ဖူးဘူး။ ပို့စ်ကို လမ်းကြောင်းလွဲအောင် ဘလော့ဂ်ကို အမှိုက်ပုံဖြစ်အောင် တမင်ရည်၇ွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ လာလုပ်နေတဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုပဲ ဖျက်ပါတယ်။ ဇော်မျိုးလာသောင်းကျန်းတဲ့အချိန် စောင့်ဖျက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ရင် တခါတရံ Comment moderation လုပ်ထားရတယ်။ အဲဒါ ဘလော့ဂ်တနှစ်မပြည့်ခင် တပတ်နီးပါး အလိုမှာမှ ဖြစ်လာတာ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးရင် ဘယ်သု့မှတ်ချက်ကိုမှ မပိတ်ဘူး။ တခုရှိတာက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ် ရန်ဖြစ်ခွင့် လမ်းကြောင်းလွဲအောင်လုပ်ခွင့်ပဲ မပေးတာ ဖြစ်တယ်။
July 22, 2010 at 12:13 PM
မငယ်နိုင် ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘော်ဒါကြီးတဲ့
ကျွန်တော်သတိထားမိတာ က ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း Buddhist extremist တွေလည်းရှိတာကို တွေ.ရပါတယ်၊
တစ်ခြားဘာသာတွေက extremist တွေက ဗုံးတွေခွဲနေသလို Buddhist extremist တွေက ကွန်.မန်.တွေမှာ အမြင်မတူသူ တွေကို အရမ်းနှိပ်ကွပ်တော့တာပဲ၊
မငယ်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုတာ မငယ်ရဲ့ ပို.စ်တွေဖတ်လို. သိရပါတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ၊ သူတော်ကောင်း မဟုတ်သေးပေမဲ့ ကောင်းတာလေးတွေကို တတ်နိုင် သလောက် လုပ်နေရတာပဲ၊ ဒါတောင်မှ အ၀ီစီ ကိုပို.ချင်နေတဲ့သူကလည်းရှိနေ သေးတယ်
တစ်ချို.တွေက မငယ်ရယ်၊ ကိုပေါရယ် ကျွန်တော်ရယ် ကို တစ်ဖွဲ.လို. ထင်နေကြတယ် အဲဒါနဲ. ကျွန်တာ် အိုင်ဒီယာတစ်ခုရတယ်၊ Asia Pacific Regional ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါ အဖွဲ.ချုပ်ကို ဖွဲ.မလားပေါ့
ကိုပေါက ဘလော့ဂါမှူးချုပ်ကြီး၊ မငယ်နိုင်က ဒုတိယဘလော့ဂါမှူးချုပ်ကြီး နဲ. ကျွန်တော်က ဘလာ့ဂါအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး(၁) ရာထူးကိုယူမယ်၊ အဖွဲ.၀င်မထားဖူး၊ နအဖ လိုပဲ ဗိုလ်တွေပဲ၊ ငယ်သားမထားဖူး၊ စိတ်ထဲရှိတာကို ချရေး လိုက်တာပါ၊ အတုအပပြုလုပ်တယ်လို. မထင်ကြပါနဲ.
July 22, 2010 at 11:01 PM
Myo dtn said...
comment တွေက ပိုတောင် ဖတ်လို့ကောင်းနေသေးတော့တယ်။ မ nge naing နဲ့ ဒေါ်မေငြိမ်းတို့ ရဲ comment တွေ အရမ်းကောင်း တယ်။ ရွှေရတုမှတ်တမ်း ကတော့ တောင်းပန်သွားတော့ လည်းပြီးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့commentကို ကိုပေါ က၀င်ကာကွယ်ပေးသွားတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ လူပျက်တွေ စကားနှစ်ခွ ထွက်တဲ့ ပျက်လုံးထုပ်ရင်တောင် dirty joke ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ အခုဟာ တည်တည့်ကြီး (နီးပါး) ရေးတာကို တခြားဘက် အတင်းဆွဲ တွေစရာမလို။ commentတွေမှာ ညစ်ညမ်းလာရင် ပိတ်ရမှာပဲလေ။ criticism ဆိုတာမှာ ဘယ်လိုဟာလဲ ခွဲခြား ရမှာပဲ။ အခုဒီ comment မပေးခင် စည်းကမ်းလေးတွေ အပေါ်မှာ ရေးထားတာကောင်းတယ်။ ယဉ်ကျေးစွာရေးပါ လို့ ဖြည့်သင့်တယ်။
July 23, 2010 at 11:50 AM
ဘုန်းကြီးသတ်တဲ့သူကိုတော့ ၇၇နှစ် အရွယ် အဘမို့ ဘာဖြစ်သလေး ညာဖြစ်သလေးဆိုတော့ ရွှေရတုက ၇၀ကျော်ပဲ မဟုတ်လို့ ရွှေလဥလို့ ရေးတာ ထင်တယ်။ ၅၀ကျော်ဆိုရင်တော့ ဆဲလို့ ရတယ် မရိုင်းဘူးလား ကိုကိုစန်း။
မိတ်ဆွေ…. စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ခံယူဖို့ စိတ်ကူးနေသလား။ ဒီစာကို အရင်ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရေး တစေ့တစောင်း သိကောင်းစရာ...
အမည်ရင်း- အောင်နိုင်မိုး။ မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်ပါ။ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့ အသက်မွေးပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန်... kopaw07@gmail.com
BUY PHONE CARDs EVERYWHERE ON THE GO
ACCA, CAT Tuition
ကောက်စိုက်မ နဲ့ ပြိုင်ဘီး
ရာဇဝင်ထဲမှာ သူတို့ကို ထားရစ်ခဲ့
ကိုပေါ နဲ့ မဒမ်ပေါ (အသွင်တူ၏ မတူ၏)
ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျ ကငျးမဲ့နတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ တိုကျပှဲ
Rita, Ever Green Sky !
ဘီအိုဘီအို ဟု ချေါပါသညျ in Unicode
ကျွန်မ၏ ခံစားမှုများသီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
:: My Little World ::
New Year Wishes - Tin Moe
ဆယ်တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမယ်... ဘွဲ့ ရရင် ဘာလုပ်ကြမယ် (အပိုင်း -၂)
ကမ်းခြေက မျှောလိုက်တဲ့ ပုလင်းစာ
ဘောင်ခတ်ပါ၊ မသတ်နဲ့ ...
De facto leader Suu Kyi gives cause for real hope (Bangkok Post)
MUA Web Converter
အက်ဝင် နှင့် သချာင်္
b l u E s k yfO res T
ရေချိုးမပြန်ချင်တော့တာကို တွေးမိတဲ့ မနက်ခင်း
50.1 ဘ၀ထဲ ရွာလည်ကြသူများ
⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး
အာမခံ ကုန်မနီ ပိုင်ရှင်နှင့် စကားပြောခြင်း
လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ
မူလလက်ဟောင်း ... ငါတော့မေ့လို့မရနိုင်ဘူး။
iShatter : iOS5Untethered Jailbreak
အကယ်လို့များ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာ ပျက်မယ် ဆိုရင်
Yu Wa Yi
Copyright © 2009 ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik - Design by Dante Araujo - Powered by Blogger